डा. महतको अवार्ड हाँस्य कलाकारलाई मसला
। बेलायतको प्रसिद्ध म्यागेजिन ‘दी ब्याङ्कर’ ले सन् २०१६ मा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्री भन्दै अवार्ड दिने घोषणा गर्दा हाँस्यकलाकारहरुका कान ठाडा बनेका छन् । सर्वसाधारणले त सामाजिक सञ्जालमा महतलाई उडाइरहेका बेला उनीहरुले के बाँकी राख्थे । चार हास्यकलाकारले अनलाइखबरलाई यस विषयका दिएका प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तः
महतमाथि व्यङ्ग्य त होइन ? मनोज गजुरेल
‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ भन्ने सुन्दा निकै मिठो लाग्छ । तर, भूकम्पको कारण घर भत्किएर टहारामा बसेका र आजका मितिसम्म एउटा सिरक किन्नका लागि १० हजार नपाएकाहरुका लागि यो खबरले कुनै उत्साह जगाउदैन ।
उत्कृष्टको मापन भूकम्पको केन्द्रबिन्दुबाटै हुनुपर्छ । कुनै एउटा विदेशी संस्थाले उत्कृष्ट भनेर दिएको उपाधीले केही सम्भ्रान्तलाई त प्रफुल्लित बनाउला तर, यो चिसोमा त्रिपालुमनी दिन बिताइरहेका भूकम्प पीडितहरुका लागि उत्कृष्ट शब्द आफैंमा व्यंङ्ग्य लाग्न सक्छ । भूकम्पपीडित नागरिक जुन कष्टका साथ बसेका छन्, त्यो देख्दा यस्तो पनि लाग्छ, कतै बेलायतबाट निस्कने पत्रिकाले महतलाई ब्यङ्ग्य गरेको त हैन ।
अर्को वर्ष झुर अवार्डः राजाराम पौडेल
विदेशका पत्रिकाले नेपाली नागरिकलाई उत्कृष्टको उपाधि दिनु आफैंमा राम्रो हो । तर, यसो भन्दैमा मख्ख पर्ने अवस्था छैन । पूननिर्माण प्राधिकरण आयोगको काम गर्ने शैली देख्दा लाग्छ अर्को वर्ष झुर अवार्ड पनि हाम्रै भागमा पर्छ । विगतमा भएको गल्ति नदोहोर्‍याउने गरि काम गर्दै जानुपर्छ । तर, हाम्रोमा उल्टो शैली छ के गर्नु ।
अब पालो प्रधानमन्त्रीकोः जीजु नेपाल
पूर्वअर्थमन्त्री महत विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भएपछि मेरो पनि आँखा खुल्यो । यति गतिला मान्छे हाम्रै देशमा रहेछन्, हाम्ले मात्रै नचिनेका रहेछौं !
महतपछि अब उत्कृष्ट हुने पालो प्रधानमन्त्रीकै होला । किनकी पूर्वअर्थमन्त्रीले दाता सम्मेलन गर्नु भयो, प्रधानमन्त्रीले दिनमा १५ घन्टा लोडसेडिङ गरेर पटकपटक मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने कुरा गर्नु भयो ।
निकृष्टको पुरस्कार दिनुपर्छः दमन रुपाखेती
डा. साबले दाता सम्मेलन गर्नुभयो । आफ्ना कार्यकर्तालाई केही द्रब्य पनि बाँड्नुभयो । केही जस्तापाता र चामलको बोरा बाँडेको कुरालाई डकुमेन्टेसन गरेर खैरेलाई बुझाउनु भयो । अनि उत्कृष्टको उपाधी हात पर्‍यो ।